Aingam-panahy avy amin'ny hetsika nataon'ny Banksy | Famoronana an-tserasera
Marika sy mpanakanto nahazo aingam-panahy tamin'ny fanimbana nataon'ny Banksy
Banksy, mpanakanto izay tsy mitonona anarana tanteraka, namana sy olon-tsy fantatra gaga andro lasa izay rehefa nopotehiny ny iray amin'ireo sangan'asa fantany indrindra: ny Girl with a Globe. Ankehitriny dia misy marika maromaro izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny hetsika nataon'ny Banksy.
Ny sasany toa an'i McDonalds na IKEA nahazo aingam-panahy avy amin'ny hetsika nataon'ny Banksy hisolo tena ny marika anaovany tombony ary hanararaotra ny fironana manimba ny mpanakanto izay tsy fantatra ny tena anarany sy ny sariny.
Misy ihany koa ireo mpanakanto hafa izay naka tahaka ny fihetsik'i Banksy haseho tahaka ny mety hisy raha ny sasany amin'ireo sangan'asa kanto malaza indrindra dia handalo ny tanan'ny artista graffiti anglisy.
Sangan'i Van Gogh, Leonardo sy ny maro hafa, dia nandalo ny eritreritr'i @argo_concepts mba hahafahantsika mahita avy ao amin'ny Instagram azy ireo hevitra mandrangitra.
Na dia ny iray amin'ny sarin'ny tena Van Gogh dia handalo ny fandravana an'i Banksy ho majika ho lasa lamba hafa eken'ny rehetra, vokatr'izany hevitra iray tena mahaliana ny fahatsapana ny fiatraikany hita tamin'ny varotra Sotheby tamin'ny androntsika.
McDonalds nanaparitaka ny sary famantarana ka ireo poti-ovy malaza mavo malaza ireo no mivoaka avy ao. Na IKEA, izay manararaotra ny hetsika Banksy hanao dokam-barotra tany am-boalohany amin'ny iray amin'ireo frame izay amidiny any amin'ireo ivon-toerany manerantany.
Ary raha Italiana i Banksy, azo antoka fa izany Mampiasa milina aho hanaovana spaghetti ary ovay io asa io ho iray amin'ireo lovia malaza indrindra amin'ny sakafo italianina.
Banksy dia hanentana hatrany ireo mpanakanto sy marika maro hafa amin'ny fihetsikao; satria azo antoka fa tsy izany no farany hitantsika amin'ity mpihantsy voajanahary ity izay miaro ny zavakanto efa lany andro sy mandalo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Marika sy mpanakanto nahazo aingam-panahy tamin'ny fanimbana nataon'ny Banksy
Mamadika ny fotoana mampalahelo an'i Tom ho sary sokitra